Codad-Saraakiishii NISA ee isudhiibe Puntland oo siro badan fashiliyey. – Radio Daljir
Codad-Saraakiishii NISA ee isudhiibe Puntland oo siro badan fashiliyey.
Oktoobar 12, 2016 11:18 b 0
Galakcyo, Oct 12 2016–Qaar kamid ah ciidanka hay’ada nabad sugidda Soomaaliyeed ee NISA oo oo maanta warbaahinta lahadlay xilli ay isu soodhiibeen dowladda Puntland ayaa kahadlay qaabkii Galkacyo loo keenay.
Qaar kamid ah saraakiisha NISA ayaa sheegay in laga kala keenay deegaamada gobolka Galgaduud looguna sheekeeyey inay ka qaybqaadan doonaan daminta colaad beeleed kajirta duleedka Galkacyo, haseyeeshee markii ay Galkacyo yimaadeen loosheegay inay ka qaybqaataan dagaalka u dhexeeya Puntland iyo Galmudug.
Saraakiishaani ayaa sheegay in ciidankii NISA ee Cadaado Joogay ay ka qayb qaateen Dagaalka Gaalkacyo, Waxaana ay sheegeen in ay go’aan qaateen Maadaama aysan hayn shaqadii loo Igmaday, aysanna Doonayn inay ku biiraan Colaadda ka aloosan Gaalkacyo.
Dhagayso Caawa iyo Daljir 12 – Oct – 2016 – Warye Axmed Shiikh Maxamed (Tallman) Studio Daljir Boossaaso
Sawirro-Puntland oo saxaafadda usoo bandhigtay ciidamo kasoo goostay DFS.